ဝင်းဒိုး7မှာ မြန်မာပြက္ခဒိန်လေးတင်မယ် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
၀င်းဒိုး7မှာ မြန်မာပြက္ခဒိန်လေးတင်မယ်
အောက်က လင့်လေးကို နှိပ်ပြီး Download လုပ်လိုက်ပါ ။ Zip ဖိုင်တစ်ခု ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ Zip ဖိုင်ကို Extract လုပ်ပါ။ အဲဒီအခါမှာ Myanmar Calenar.Gadget ဆိုတဲ့ Folder တစ်ခု ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ Folder ကို Copy ကူးပြီး C:\_Program Files\_Windows Sidebar\_Gadgets ဆိုတဲ့ Folder ထဲမှာ Paste လုပ်လိုက်ပါ။
http://www.myanmaritmen.com/ မှ ရယူထားပါသည်
တစ်နေကွယ် သေနယ်သို့တစ်ကြိမ်ကူး မသေဘူးလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့
နေကွယ်တာကြိမ်ဖန်များရင်ဖြင့် သေနယ်ရွာ တစ်ကြိမ်သွားရလိမ့် တားမရဘူး
အောက်ပါအသင်းဝင် 43 ဦးတို့မှ aung lwin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုတင့်, ကိုသီလ, စစ်တွေသားချေ, စိုးလေး, ညီညီသစ်, ညီညီဇော်, တာတာ, နီထွန်းဦး, မွန်သန့်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ကျော်ထွန်းလင်း, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်တေဇာဝင်း, မောင်ကြာညို, အောင်လွင်ဦး, ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an), ဖြိုးယံလေး, arkaraung, aung3355@gmail.com, aungphyo, bonge, chemboy84, December-31, g00gle, gogogyi, hellboy, htoo war, kaung kin lu, kaunghtetthu, ko myo, lokasara, Lwin Thu, maJunior, minthike, minthumon, PyaitSone, sAnDViper, tainlwar, tu tu, whiteman, yawnathan, Ye Aung
16-09-2011, 12:16 PM
ပို့စ်3ခုအတွက် 8 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - ၀င်းဒိုး7မှာ မြန်မာပြက္ခဒိန်လေးƛ
အကို ရေ ကျုပ်ကျက်လီ့ (ကြည့်ကျပ်လုပ်) အုံး www.myanmaritmen.com က မရှိဘူးလုပ်နေတ.ယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ saiaikbee အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by saiaikbee
.com အစား .org ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ Myanmar Calendar for 2011
ဇာနည်စိုး, ကျော်တိုး, မောင်သံသရာ, အောင်ဗလ, bagothar85, kaung kin lu, Lwin Thu, minthike, minthumon, thein zaw min, tu tu
17-09-2011, 12:21 PM
Gadgets မှာ မြန်မာပြက္ခဒိန်လေး သုံးချင်ရင်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ...ဒါကတော့ မသိသေးတဲ့သူတွေရယ် ပြီးတော့ သုံးချင်သူတွေအတွက်ရယ် ရည်၇ွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ...ဖိုရမ်မှာတင်ပြီးသားရှိတယ်ဆိုရင်လဲ အဆင်ပြေသလိုသာဆောင်ရွက်လိုက်ကြပါတော့ ...ပထမဆုံး ဒီလင့်ကနေ ဒေါင်းလိုက်ပါ http://www.mediafire.com/?uyddyl0g3t3u25k ...ဒေါင်းလို၇တဲ့ ဖိုဒါကို C:>Program Files>Windows Sidebar>Gadgets ထဲထည့်ပါ...ပြီးရင် desktop(R-click)->Gadgets ကနေ Myanmar Calendar ကို ကလစ်နှစ်ချက် ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ...သင်ယူနေတဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အမှားပါခဲ့ရင်လဲ ခွင့်လွှတ်ပြီး လမ်းပြပေးကြပါ...အဆင်ပြေပါစေ...
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ မြန်အောင်သား အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, တာတာ, ဖန်ဆင်းရှင်, မောင်သံသရာ, arkaraung, g00gle, Lwin Thu, minthumon, phyomyintthein, PyaitSone
ပို့စ် 23 ခုအတွက် 57 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Find More Posts by မောင်ကြာညို
ကျေးဇူးပြုပြီး IFile လေး လုပ်ပေးပါ . . . . . . . . . . .
Originally Posted by အောင်လွင်ဦး
ကျွန်တော် Ifile ကို ပြောင်းပေးထားလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ...
စွမ်းကမ္ဘာ, ကျော်တိုး, အောင်လွင်ဦး, tu tu
တည်နေရာ: THAI LAND
ပို့စ် 211 ခုအတွက် 1,245 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
မိုက်တယ် မြန်မာနေ့တွေ လက်ချိုးရေစရာမလိုတော့ဘူး
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကျော်တိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကျော်တိုး
20-06-2012, 05:49 PM
ပို့စ် 8 ခုအတွက် 38 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
မြန်မာ calender gadget မရသေးသူတွေအတွက် အောက်ကလင့်မှာ တိုက်ရိုက်ယူနိုင်ပါကြောင်း....
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ မိုးဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, အောင်ဗလ, arkaraung, g00gle, tu tu
Find More Posts by မိုးဦး
တည်နေရာ: Varanasi India
ပို့စ် 15 ခုအတွက် 36 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဘလော့ဂ်မှာတင်ဖို့အတွက် Date မှန်တဲ့ မြန်မာပြက္ခဒိန် ကောင်းကောင်းတခုလိုချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပီး ညွှန်ကြားပေးကြပါဗျာ။
Visit lokasara's homepage!
Find More Posts by lokasara
Virus နှင့် User များ gnyi Virus & Anti-virus ပိုင်းဆိုင်ရာ 1 13-10-2010 06:30 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 07:22 AM